အားကစားသတင်းခေါင်းစဉ်များ Global ဆောင်းပါးများ WebSite.WS | Gvmg - Global Viral Marketing Group│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
Myrtle Beach, South Carolina has become well-known for its golfing, with many people traveling to what has become known as the Grand Strand, specifically for this purpose. The area includes more than one hundred golf courses throughout, with the golfing being offered on an individual basis and also through golf package deals. Depending on what you are looking for fromagolf course, you will find it here. These courses are designed by some of the greats, such as Tom Jackson, P.B. Dye, Clyde John […]
From March 14th and for the next three weeks until April 3rd, 64 NCAA College Basketball teams will be performing after one common goal: to win the National Championship in Indianapolis. The top four seeds in the NCAA tournament are Duke University in Durham, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား; Villanova University in Villanova, Pennsylvania ပြည်နယ်; the University of Connecticut and the University of Memphis. In 1981 the NCAA wanted to increase the number of teams that would participate in this tournament from 48 ရန် 64. တီ […]
Every golfer wants to know the best golf driver tip. I hate to disappoint you but there are many great golf driver tips that could be the key to unlocking monster drives for you. Every month the golf magazines have dozens of tips in them, but none of them get to the root of the problem. If I were to get the opportunity to writeagolf driver tip foramagazine, I’d say something against the norm. Something teaching instructors wouldn’t want to hear. Do you want to know what it is? ဒါဟာ […]
If all men measured up to the standards of true sportsmanship, there would be no need for game, ငါး, and forestry laws. Neither would there be so much need for the laws that regulate human affairs in general. ဒါပေမယ့်, in the fishing game, it is the true sportsman, withalove for the great outdoors,awholesome respect for the welfare of others, and consideration for living and growing things, who sets the good examples for the youth to follow. In reality, fishing games differalot from the other […]
When you’re done deciding the size and type of fly, မျဉ်းကြောင်း, rod and reel you want for your fly fishing; you’re all set to go! Cast away and wait until you get your most wanted species’ ကောင်းပြီ, that will happen only if you don’t need any beginner’s tips for casting your line. ဟုတ်တယ်, fly fishing could get you excited especially if you’ve been preparing and looking forward for it but what you just can’t dip or hurl your line in the water without knowing really si […]
A Swordfish on deck It’s all about fishing. The dark side gladiator of the ocean. The swordfish. Have you ever tried landingabig swordfish on deck? အပြီး 5-6 hours fight witha1000 pound swordfish that had no intention of giving up withoutafight. This great fish isalegend living in its own time. Killingarecord fish. How many of you would cut the line because you knew you hadalarge female breeder on the line of any fish? I guess you would cut the line because you would feel bad […]
The Red/Black system is one of the better known roulette systems around. Your bets for this system are on either red or black, with your pay out 1 ရန် 1, meaning your money is doubled forawin. It is worth keeping in mind that your chances of winning each bet are just under 50/50 due to the fact that the0နှင့် 00 gives the casino its advantage. To begin you must chooseacolor and place your bet on either red or black. သင်နိုင်ရင်, keep your winnings and place your starting bet again. If you lose […]
From all over the world, from North America to Africa, almost everybody loves to play golf. တကယ်တော့, golf has been known to most countries in the world today. But wouldn’t it be nice playing golf in other areas, not just in your usual courses which have become too ordinary for you? How about takingagolf vacation? If you are keen in seeing how golf is being played in cultures other than yours or you want to see new sights and new course golf course surroundings, then you might want to con […]
To lower your golf score, you’ve got to put some time in. This is the main reason golfers quit the game. Golf isavery challenging game that requires intense concentration, ကျွမ်းကျင်မှု, and many physical attributes. One approach to lower your golf score is one that is off the course and does not involve swingingaclub, taking lessons or buying more gimmicky training aids. The approach I’m talking about is working on your ‘machine’ to producearepeatable golf swing for 18 hol […]
It all depends on your feet. အခြေခံအားဖြင့်, golf shoe or not, shoes must be comfortable to wear and should fit good. ဒါ့အပြင်, the shoes should fit your budget as well as your lifestyle. Out with the old Old golf shoes have those spikes that are made out of metal. These types of foot wear are no longer allowed on the golf greens. Throw them out and getanew pair of great golf shoes. Current makers of golf shoes use spikes that are soft and made of plastic. Brand it or not The brand is not as important […]
အပန်းဖြေမှုသည် လူသားတိုင်း၏ဘဝတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအချက်ဖြစ်သည်။. ငါးဖမ်းသူများ သို့မဟုတ် တံငါသည်များသည် အပန်းဖြေရှာဖွေသူများ၏ အကြီးဆုံးအုပ်စုတစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသည်။, အပန်းဖြေခြင်း သို့မဟုတ် အစားအစာအတွက် သဘာဝ၏ သတ္တဝါများနှင့် ဒြပ်စင်များကို အသုံးပြုသည့် အခြားအုပ်စုများထက် အားသာချက်တစ်ခုရှိသည်။. ဧရိယာအများအပြားတွင် ငါးဖမ်းခြင်း၏ရေပန်းစားမှုသည် ထောင့်ဖိအားအပေါ်အခြေခံသည်။, ချောင်းများနှင့် ရေကန်များ၏ ပုံမှန်စွမ်းရည်ထက် ကျော်လွန်နေပါသည်။. ငါးမျိုးစိတ်တိုင်းတွင် ငါးမျိုးစိတ်များရှိသည်။ […]
We will initiate our discussion with the brief introduction to the betting exchanges. စတင်ရန်, we can define ‘Betting Exchanges’ asatool that aims to bring all the punters together so that they can easily bet against each other. တကယ်တော့, we can say that the sole aim of the game is to bring the two persons together, so that they can place or exchange contradicting bets. To know detailed description about the fundamentals of the betting exchanges, you are just required to paya[…]
Run, walk, ခုန်, dance-do whatever it takes to get the whole family moving. That’s the advice parents are getting as the weight of the nation’s children continues to climb. According to the Mayo Clinic, the rate of obesity in the U.S. has more than doubled for preschoolers and adolescents, and it has more than tripled for children ages6ရန် 11 in the past 30 နှစ်ပေါင်း. ကံကောင်းထောက်မစွာ, you don’t need to get your childapersonal trainer. Here are some tips to help: • Beagood ex […]
France won the Women’s Epee team competition, crushing the home town Russian team 45-37 in the gold medal bout. Germany earned bronze witha42-40 win over Estonia. In epee, fencers attempt to earn points by hitting their opponent’s 1/24th ofasecond before they get hit. The event simulatesaduel to first blood and is the only fencing discipline in which both fencers can scoreapoint on the same action. အမေရိကန်. women’s epee team defeated South Africa 45-17 in their first ma […]
အကြီးအ Giro d'Italia
Tour de France မှမှုတ်သွင်းသည်, Giro d'Italia သည် Passo dello Stelvio တွင်မကြာခဏကျင်းပသောစက်ဘီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်, သောတောင်တန်းခရီးဖြစ်ပါတယ်. အပြေးပြိုင်ပွဲယူ3ပြီးစီးရန်ရက်သတ္တပတ်. ပထမဆုံး Giro d'Italia ပြိုင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့သည် 1909 မီလန်မှာ, ကရေးစပ်ခဲ့သည် 8 အဆင့်များနှင့်စုစုပေါင်းအရှည် 2448km, အနိုင်ရရှိသူသည်အီတလီမှ Luigi Ganna ဖြစ်သည်. ထိုကတည်းက, သာ3ပြိုင်ဘက်များသည်စက်ဘီးပြိုင်ပွဲကိုတစ်ကြိမ်ထက်မကအနိုင်ရခဲ့သည်, ဤအရာများသည်: Alfredo Binda, Fausto Coppi သည်အီတလီမှ Eddy Merckx နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံမှဖြစ်သည်. Alfredo Binda နှင့်ပတ်သက်ပြီးသိလိုသောအချက်မှာသူ၏အလားအလာနှင့်မယုံနိုင်လောက်သောရမှတ်များကြောင့်ဖြစ်သည်, လူအတော်များများကသူယှဉ်ပြိုင်မှုကနေထွက်တာကပိုကောင်းတယ်ထင်ကြတယ်, ဒါပေမယ့်၌တည်၏ 1933 သူသည်နောက်တဖန်အနိုင်ရရှိခဲ့သည်. Giro d'Italia သည် Grand Tour (၃) ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျင်းပရာရှုခင်းများကြောင့်လူကြိုက်များလာသည်။. Passo delle Stelvio သည် Alps Retiche တွင်တည်ရှိသောအီတလီ၌အမြင့်ဆုံးဖြတ်သန်းမှုဖြစ်ပြီးဥရောပသမိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်. အဘို့ 2006 အဆိုပါ Giro d'Italia စုစုပေါင်းရပါလိမ့်မယ် 3.526,2 အရှည်ကီလိုမီတာနှင့်စုစုပေါင်း 21 အဆင့်. ပြိုင်ပွဲကိုမေလ ၆ ရက်မှမေလ ၂၈ ရက်အထိကျင်းပမည်ဖြစ်သည်. ပထမဆုံးအဆင့်ကိုဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံများမှာပထမဆုံးနေ့ရက်များမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်. ဒါ့အပြင်, ယှဉ်ပြိုင်မှုမှာသြစတြီးယားနှင့်ဆွစ်ဇာလန်တို့တွင်ပြေးဆွဲမည့်ကီလိုမီတာအချို့ရှိသည်. စက်ဘီးစီးခြင်းအဖျားလမ်းများပေါ်တွင်အပြေးနေသည်နှင့်ပရိသတ်များအများအပြားရုံလာမည့် Giro d'Italia စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်. အကြီးအ Giro d'Italia
Golf and fishing could not be more different but they both have something in common and that being is, how they give enjoyment and pleasure to all who participate in the sport. For most people they are hobbies and for others it is how they make their living. You can earn big money asaprofessional golfer. May I suggest if you do not play golf and think the sport is not for you then think again? The proof of the pudding is in the eating. If it is the Rupert bear yellow checked pants, red jumper and blue cap that deters you from venturing onto the green then do not let this put you off. This isafamiliar trade mark of most players who are comfortable with the Disney look. You wear what you are comfortable with. Golf has to be one of the most laid back relaxing and enjoyable sports out there; ifasport can excite and give pleasure throughoutawhole game then need I say anymore. Learning to play isagreat experience and can be great fun; mistakes will be made and no doubt this will leave your fellow golf partners doubled over with laughter. It will be easier for you to understand why this game is one of the world’s most popular sports by joining in. ငါးဖမ်းခြင်း, If you intend to take up angling in the sea make sure you are inaboat, as you do not want to end up bait for most big fish. Another peaceful sport is fishing. Imagine yourself sitting on the river bank with your fishing basket at your side fully packed with sandwiches andaflask of piping hot coffee. And to make the day even more special are the sedate and scenic surroundings accompanied of course byaflowing river. The beauty of fishing is the feeling it gives as i.e. not havingacare in the world. A very rewarding sport when the fish start to bite. Fishing can become an addictive sport or hobby where you never want to go home, what is so wrong in that I ask unless of course you haveawife and kids. How to castabaited rod likeaprofessional is not as hard as you may think, the right guidance tips and advice from an experienced person in this field will prove to be the best move you could make in acquiring these skills for your self. Kevin Brovold gave me the inspiration that was needed to fulfill my dream of becomingapro with his Golf Magic tips on the sport. Choosing which sport to take up may cause problems. Problem solved do both. http://www.benidormbeaches.com Golf and Fishing what have they got in common?
သင်ဘာကြောင့် Do အကျိုးမပေးသနည်း’ နည်းပြဂေါက်သီးအကြောင်းအချက်များမှ
ဂေါက်သီးသမားအများစုသည်ရင်းမြစ်များစွာမှဂေါက်သီးအကြံဥာဏ်များကိုရရှိရန်အခွင့်အရေးများစွာရှိသည်. သို့သျောလညျးအပေါငျးတို့သ၏စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးရှုထောင့်အများအပြားသည်ဤနည်းပြဂေါက်သီးအကြံပေးချက်များမှအများကြီးအကျိုးမပေးနိုင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ. ဘာအကြောင်းပြချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်? ဒါဟာနည်းပြဂေါက်သီးအကြံပေးချက်များကိုလုံလောက်သောအသေးစိတ်ရှင်းပြကြသည်မဟုတ်လော? ဒါမှမဟုတ်ဂေါက်သီးသမားအများစုကသူတို့ကိုနားလည်ဖို့ပျက်ကွက်တာလား? နည်းပြဂေါက်သီးအကြံဥာဏ်အများစုကိုလက်တွေ့ကျသောနည်းဖြင့် ပေး၍ ရှင်းပြသောကြောင့်ဤဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအကြောင်းပြချက်အားလုံးသည်အလွန်အမင်းမဖြစ်နိုင်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤနက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းရန်မျှော်လင့်ချက်ရှိပါကအကောင်အထည်ဖော်သည့်နေရာတွင်အဖြေကိုရှာဖွေရမည်. စိတ်ကနားလည်ပေမယ့်ခန္ဓာကိုယ်ကမသတ်နိုင်ဘူး. အားပျော့သောကြောင့်တင်းမာနေသောကြွက်သားများသည်ဖိစီးမှုနှင့်ဖိအားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်. ဂေါက်သီး၌ကစားသမားအမြောက်အများရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးဂေါက်သီးသမားများကြားတွင်လေ့ကျင့်ခန်းများမကြားရသောအခါကောင်းသောနေ့ရက်များကိုစွဲစွဲမြဲမြဲဆုပ်ကိုင်ထားခဲ့သည်. ကြွက်သားများကိုအားဖြည့်ရန်နှင့်ဂေါက်သီးအား၎င်းတို့၏ဂေါက်ဂေါက်ရိုက်တာကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေရန်ကူညီရန်ဂေါက်သီးအားအစွမ်းခွန်အားပေးမှုလေ့ကျင့်ခန်းအကြောင်းကိုမည်သူမျှမကြားနိုင်ပါ. ဤရွေ့ကားဆန့်လေ့ကျင့်ခန်းအလွန်အနည်းငယ်မျှသာနှင့်လုံးဝမတည်ရှိခဲ့ကြသည့်နေ့ရက်ကာလဖြစ်ကြသည်. ဒီလိုဂေါက်သီးသမားမျိုးတွေဟာဂေါက်သီးနည်းပြအများစုကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးသူတို့ရဲ့ကစားနည်းကိုလိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းဟာကြီးလေးတဲ့ပြproblemနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်. ဂေါက်သီးသမားများစွာသည်ဂေါက်သီးနည်းပြများထံမှအကျိုးကျေးဇူးများမရရှိသည့်နောက်အကြောင်းရင်းတစ်ခုရှိသေးသည်. ဂေါက်သီးအစွန်အဖျားတိုင်းသည်ဂေါက်သီးတိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ. အချို့သောအကြံပေးချက်များသည်အချို့သောဂေါက်သီးသမားများ၏စတိုင်လ်များသည်အခြားသူများ၏ပုံစံနှင့် ပို၍ ကိုက်ညီလိမ့်မည်. ဒီမှာပြproblemနာကဂေါက်သီးသမားတော်တော်များများဟာနည်းပြဂေါက်နည်းပြအနည်းငယ်ကိုမသုံးနိုင်ဘဲကျန်အရာအားလုံးကိုမစွန့်လွှတ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိသောအခါချက်ချင်းစိတ်ပျက်အားလျော့သွားသည်. ဒါဟာတကယ်ကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းပါတယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အတွက်အကောင်းဆုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောနည်းပြဂေါက်သီးအစွန်အဖျားဟာရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့စောင့်ဆိုင်းနေရသောစာရင်းရှည်ထဲမှာရှိနေလို့ပါ။. သင်ဘာကြောင့် Do အကျိုးမပေးသနည်း’ နည်းပြဂေါက်သီးအကြောင်းအချက်များမှ
When gambling on football you must look at the football gambling line statistics . Football game lines are set by casinos to try and split the action down the middle. Football point spreads are not used to predict how muchagiven team will win by. Casinos just care about splitting the action. ဥပမာအားဖြင့်, if Carolina is favored by3over Atlanta. The casino just wants to even the action out. They may move the spread to 3.5 ဒါမှမဟုတ် 2.5 to get more bettors, and to make the action more even. If all the bets came in for Carolina and Carolina won, the casino would takeahuge loss. Casinos are not into gambling they are into making money. Splitting the action down the middle ensures the casino will make money. Football games normally end with one team winning by the following amounts: 1,3,4,6,7,10,11,13,14,17,20,21,23,24,27,28,နှင့် 31. I call these key points. When you see .5 added toaspread be careful because it could beatrap oragreat deal. .5 can make all the difference in the world. If you getaspread of 5.5 then the .5 does not makeahuge difference because most games don’t end withateam winning by 5. Butaspread of 3.5 ဒါမှမဟုတ် 2.5 can make or break you. You must learn to read the gambling line statistics to determine why the casino placed the points where they did and why they movedacertain line. Lastly when betting on football remember this, you are betting against the general public not the odds makers. The odds makers know everything the general public knows and they are trying to split the action based on the public’s knowledge. So the real question is “is the public wrong for this game?” For example the Colts lost Peyton Manning, now everyone is saying the Colts are going to get blown out. That is public perception, are they right or wrong? A couple of tips, normally when ESPN or any other sports guy is hypingateam, don’t listen. These guys just hype the team of the week. Also in the NFL the underdog winsalot more than college. Football Gambling Line Statistics
Iron Palm Q မှဆက်လက်&Sigung ရစ်ချတ် Clear အပိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး6အဆင့်မြင့်နည်းလမ်းများပါဝင်သည် (ဒါပေမယ့်ကန့်သတ်ထားကြသည်မဟုတ်) ဝါဂွမ်း, နွေ ဦး ပေါက်စ, မီးလက်များ (ထန်းပင်မီးလျှံ), အဆင့်မြင့်သောအကွာအဝေးမထိခြင်းနှင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်အုန်းများ. စွမ်းအင်ထုတ်ယူရန်အတွက် Yin Palm ကိုအသုံးပြုနည်းနှင့် Yang Palm ကိုတစ်စုံတစ်ယောက်အားအပျက်သဘောဆောင်သောစွမ်းအင်အဖြစ်မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာခြင်းလည်းပါဝင်သည်. ထို့အပြင်နှောင့်နှေးသောသေဆုံးမှုထိတွေ့မှုနှင့်အခြားအဆင့်မြင့်သပိတ်မှောက်ခြင်းနည်းလမ်းများသည်အဆင့်မြင့်သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၌သာမကလူတစ် ဦး အားနေရာတိုင်းနီးပါးကိုထိုးနှက်နိုင်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်၏ကိုယ်ခန္ဓာမှတစ်ဆင့်အခြားတစ်နေရာရာရှိရည်ရွယ်ထားသည့်နေရာတစ်ခုသို့သပိတ်မှောက်ခြင်းများရှိခြင်းအပါအ ၀ င်စွမ်းအင်လွှဲပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာပိုမိုအဆင့်မြင့်သောနည်းစနစ်များလည်းရှိသည်။. လုံ့လရှိသူသပိတ်များစွာအတွက်ကုသနည်းများပါ ၀ င်သည်. ကျွမ်းကျင်မှုစစ်ဆေးခြင်းတွင်ပျဉ်ပြား (၃) ခုကိုင်တွယ်နိုင်ပြီး၎င်းတို့အားလုံးကိုချိုးဖျက်နိုင်ခြင်း (သို့) နည်းပြဆရာမှရွေးချယ်ထားသည့်ဘုတ်များမှတစ်ခု (သို့) နှစ်ခုကိုအတူတကွချိုးဖျက်ခြင်းနှင့်အုတ်များကိုချိုးဖျက်ခြင်းနှင့်အုတ်ပေါက်များနှင့်ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။. အခြားကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများလည်းရှိသည်။ ၎င်းသည်အလွန်ထူထပ်သောအင်အားသုံးဒိုင်းလွှား pad မှတဆင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိုးနိုင်ပြီး pad ကိုကိုင်ထားသူအားထိုနေရာတွင်မရှိသည့်နေရာဟုထင်မြင်စေသည်။. ကျွန်ုပ်တွင်ကျောင်းသားများအတွက်ရဲအရာရှိအချို့ရှိပြီးယင်းသည်ကျည်ဆံထိရောက်သောအင်္ကျီဖြင့်ပြသသည်. ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အဆင့်မြင့် Tai Chi သင်ရိုးညွှန်းတမ်း၏အတွင်းပိုင်းသံခန္ဓာကိုယ်ပါ ၀ င်သည့်သင်ကြားမှုနည်းစနစ်တစ်ခုလည်းရှိသည်, လဲဂွမ်းအုန်းနှင့်အဆင့်မြင့် Dim Mak တို့၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုထိမှန်နိုင်ခြင်း၊ သင်လိုချင်သည့်နေရာကိုထိုးနှက်နိုင်ခြင်းနှင့်ပြိုင်ဘက်ကိုမည်သို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိတွေ့နိုင်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ (ဒါမှမဟုတ်ဒါကြောင့်ပုံရသည်) သူတို့၏ကျောရိုးနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်သို့ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုထုတ်လွှင့်သည်. ဆက်လက်ပြုလုပ်ရန် ‘Iron Palm Part 8’ သံထန်းအပိုင်း 7
ရထားလမ်းဖောက်ခြင်းပုံစံကိုလူများစွာ၏ပထမဆုံးနိဒါန်းမှာအထပ်သားစာရွက်ပေါ်တွင်ရိုးရှင်းသောစက်ဝိုင်းသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံနှင့်အတူဖြစ်သည်. ရှုခင်းမရှိ, မည်သည့်အဆောက်အ ဦး၊. ဒီဟာကြာကြာမခံပါဘူး, သို့သော်, ပိုမိုလက်တွေ့ကျစေရန်ရထားလမ်းနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုစတင်ထည့်သွင်းရန်တိုက်တွန်းမှု. လူများစွာအတွက်, ဒီတစ်သက်တာကြိုးပမ်းမှုဖြစ်လာသည်, အလွန်ကြီးမားသောအချိုးအစားမှကြီးထွားနိုင်ပါတယ်. အပြင်အဆင်တိုင်းသည်ကွဲပြားခြားနားပြီးလူတိုင်းတွင်သူတို့အကြိုက်ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းများရှိသည်, ဒါပေမယ့်အောက်ပါ5ပစ္စည်းများသည်သင်၏မော်ဒယ်ရထားလမ်းအတွက်သရုပ်မှန်နှင့်စိတ် ၀ င်စားမှုကိုတိုးမြှင့်သည့်အသုံးအများဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းအချို့ဖြစ်သည်. 1. ရထားဘူတာရုံသည်လူအများစုမိမိတို့၏အပြင်အဆင်တွင်ထည့်သွင်းထားသောပထမဆုံးအဆောက်အ ဦး များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်. မီးရထားလမ်းသည်အစနှင့်အဆုံးမှတ်ကိုပေးသည်။ ၎င်းသည်မြို့သို့မဟုတ်မြို့တစ်ခုလုံးကိုတည်ဆောက်ရန်အတွက်အခြေခံဖြစ်သည်. 2. အလင်းရောင်ရထားလမ်းများအတွက်အလင်းပုံစံအမျိုးမျိုးရှိသည်. နောက်ခံအလင်းရောင်တစ်ခုရှိနိုင်ပါကနောက်ခံအလင်းသည်မြို့၏ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြည့်ဆည်းရန်လက်တွေ့ကျသောလမ်းများသို့မဟုတ်လမ်းမီးများရှိနိုင်သည်. ဤသည်အလှဆင်ဘို့တင်းကြပ်စွာဖြစ်နိုင်သည်, သို့မဟုတ်သူတို့သည်လမ်းများကိုအမှန်တကယ်တောက်ပစေရန်ညအချိန်တွင်ထွန်းလင်းနိုင်သည်. 3. မီးရထားလမ်းများမော်ဒယ်ရထားလမ်းတည်ဆောက်သည့်အခါစက်ခေါင်းများသည်များသောအားဖြင့်အများဆုံးအာရုံကိုရရှိသည်, ဒါပေမယ့်ရထားလမ်းများအတွက်ရွေးချယ်မှုအဖြစ်ကောင်းစွာရှိပါတယ်. 4. လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များဒီဇိုင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်လူမပါဘဲမြို့သို့မဟုတ်ရထားလမ်းခြံသည်မပြည့်စုံပါ. ပြီးတော့သင့်ရဲ့အပြင်အဆင်ဟာတောင်တန်းများ (သို့) ကျေးလက်ဒေသများကိုဖြတ်သန်းသွားရင်, တိရိစ္ဆာန်များသည်ပုံစံသစ်ကိုသရုပ်မှန်တစ်ခုထိပေါင်းထည့်သည်. 5. Landscaping ရထားလမ်းပြုပြင်ခြင်းအတွက်ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်. သင်သည်မြက်ကဲ့သို့သောအရာများကိုထည့်နိုင်သည်, သစ်ပင်များ, လမ်းကြောင်းနှင့်အတူရေကန်များသို့မဟုတ်မြစ်များ. သို့မဟုတ်သင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာရနိုင်ပြီးသင်၏ရထားကိုဖြတ်သန်းရန်တောင်ကုန်းများနှင့်ချိုင့်ဝှမ်းများထည့်နိုင်သည်, နှင့်တောင်တန်းများမှတဆင့်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်း.5ထိပ်တန်းမော်ဒယ်ရထားဆက်စပ်ပစ္စည်း
After they won the World Cup, Italy finds itself in one of the biggest match fixing scandals in the decade. Four of the biggest clubs on the Continent have been recently found guilty of paying to have the marches fixed and the severe punishments include demotion and points deductions. Juventus, the champions, where relegated from Serie A to Serie B and they were givena30 point deduction for next season. Fiorentina was also relegated to Serie B and hit with -12 points for next season; Lazio, relegated to Serie B and docked seven points. Milan docked 44 points in last season’s standings, dropping them to eighth place and outside the qualifying places for European competition, the Milan was not relegated and they will start next season with -15 မှတ်. The scale of the punishment is difficult to comprehend for many. Only Roma among the champions of the past 15 seasons remain untouched. Those four have won all but two of the past 20 titles. But the response to the sentences has been mixed within Italy. It definitely strikes around 20 million fans of the soccer in that country, since their best players are now forced to play abroad. Some say that the sentences are not fair since the sport of soccer asawhole is not corrupt, and some thought that this kind of justice is what it takes to clean the calcio from corruption. And some say that the next step should be to rewrite the rules of Italian soccer in order to prevent this from happening again. Italian Pride Hit with the Sentences for the Calcio
I moved to Coloradoalittle over five years ago. Although I was justaskier at the time, it was my goal to becomeasnowboarder. Months before the season started, I spent hundreds of dollars on all the gear I would need: Board, bindings, boots, jacket, ဘောင်းဘီ, andacouple layers of fleece sweatshirts to keep me warm on those cold blizzard days. After all these expenses, I found myself short on money and decided to buyacheap pair of thermal underwear fromalocal Wal-Mart. In mid-December of that year, the mountains received quiteadumping of new snow, and my friends and I decided to make the trip to Vail to enjoy the fresh powder. While carving down one of the resort’s legendary bowls, I accidentally caught an edge and ended up sliding face first down the steep incline. By the time I managed to stop myself,agood couple feet of snow had jam-packed my jacket and pants. I was soaked to the bone, freezing cold, and standing in an almost full whiteout blizzard. When I finally reached the lodge, my Wal-Mart thermal underwear was soaked beyond repair, and I had managed to catch quite the nasty cold. Needless to say, I traded the snowboard forawarm bed andacouple gallons of Ny-Quil for the remainder of the weekend. The following season, I decided that it was time to invest in some quality thermal underwear. Something warm. Something waterproof. At my local sporting goods store,ayoung salesman recommended the store’s featured product, Under Armour cold gear. I must admit I wasalittle skeptical at first. I was under the impression that Under Armour was created to keep you dry, not necessarily to keep you warm. သို့သော်, the young man swore by the new cold gear, and claimed that it was the driest and warmest cold weather protection on the market today. Taking his advice, I purchasedacrewneck, ဘောင်းဘီ, socks and an outdoor hood. Although the gear came to over $200, I felt it was worth it to keep my body warm and dry during the next ski season. The first couple weeks of the season were great! The cold weather gear kept me warm and dry in the mountains, and seemed to be serving its purpose perfectly. Then right around the end of December, we made the trip to Vail. Once I reached about 12,000 ပေ, I could no longer feel any of my appendages due to the bitter cold. The remainder of the season was miserable. The weather got colder and colder, and my new Under Armour cold gear, although doingagreat job to keep me dry, was no match for the cold mountain winds. For the rest of the season, I was forced to wear my old Wal-Mart thermals on top of the Under Armour to keep warm. နောက်ထပ်တစ်ခါ, my thermal underwear had failed me. This year, I was determined to solve my problem and enjoy what was predicted to be the coldest and snowiest season yet. After running some Internet searches, I foundaproduct known as military thermal polypropylene underwear. ကြည့်ရသည်မှာ, the military uses unique cold weather technology to developaspecial kind of clothing, known as polypropylene, to keep their troops dry and warm in combat situations. According to my research, polypropylene thermal underwear was only recently approved for use outside the military, so I decided to see what the stuff was all about. နောက်တဖန်, I purchasedapolypropylene crewneck, ဘောင်းဘီ, socks and neck warmer. To my astonishment, my total price was under $70, less than one third what I had paid for my Under Armour cold gear. At this price, I honestly didn’t expect it to work very well, but decided to give itatry anyway. Over Christmas weekend, my friends and I once again decided to make the trip to Vail to enjoy some of the best snow Colorado has received in years. နောက်တဖန်, we dropped back into their legendary back bowls, and again I tookanosedive right down the steep incline. Once again jam-packed with snow, I sadly stood up, waiting for the cold wetness to sink into my skin. I waited. And waited. All day long, I took falls in pile after pile of fluffy powder. And all day long I remained dry and warm. I was utterly amazed! Not only hadaspentafraction of what I had on Under Armour cold gear, but I also remained warm and dry for the entire snowy weekend. My search for the perfect thermal underwear was over. So next time someone asks you what type of gear they need to stay warm in the cold, windy Rocky Mountains, tell them to check out military issued polypropylene thermal underwear. I guarantee it will be the last pair of thermals you ever buy! Under Armour vs. Military Thermals: Choosing the Best Ski Gear
ဂေါက်သီးသုံးခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုမှာမှန်ကန်သော putter ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်သင်ပြုလုပ်မည့်အရေးကြီးဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်. ဒါဟာသင်အများဆုံးအသုံးပြုလိမ့်မယ်လို့ကလပ်ဖြစ်သကဲ့သို့သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသော putter ကိုရှာဖွေရန်အလွန်အမင်းအကြံပြုသည်. ငယ်ရွယ်သောလူငယ်အရေအတွက်ဂေါက်သီးကစားခြင်းနှင့်အတူအငယ်တန်းဂေါက်သီးကိရိယာများနှင့်အငယ်တန်း putters ၏ထိပ်တန်းနေရာရရှိရန်ပိုမိုလွယ်ကူလာသည်။. Golf Buy It Online သည် Nike နှင့် Masters အပါအ ၀ င်ဂေါက်သီးတွင်အကောင်းဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အချို့အားဖြင့်ဂေါက်သီးကစားသမားအဆင့်အားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထုတ်လုပ်ထားသောအငယ်တန်း putters များစွာကိုရွေးချယ်သည်။. အငယ်တန်း Nike Putters အကွာအဝေးတွင် Nike Golf Par Red Red Putters ပါဝင်သည်, Nike ဂေါက်သီး Birdie အပြာရောင်အငယ်တန်း Putters နှင့် Nike ဂေါက်သီးလင်းယုန်ငွေအငယ်တန်း Putters. Nike Golf Par Red Junior Putters ကိုအကောင်းဆုံးခွင့်လွှတ်မှုနှင့်ဆုအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်. အနီရောင်ထည့်သွင်းမှုနှင့်အတူဤမယုံနိုင်လောက်အောင်ဒီဇိုင်း putter Nike ရဲ့ Par Red Range အတွက်ယာဉ်မောင်းများနှင့်သံချီးမွမ်းရန်ပြီးပြည့်စုံသော putter ဖြစ်ပါသည်. Nike ဂေါက်သီး Birdie အပြာရောင်အငယ်တန်း Putters နှင့် Nike ဂေါက်သီးလင်းယုန်ငွေအငယ်တန်း Putters Par Red Putters ကဲ့သို့တူညီသောကလပ်, ဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောအမြင့်အတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်. Par Red Putters ထက်လျော့နည်းဖြစ်ကြသည် 50 လက်မအမြင့်; Birdie အပြာရောင် Putters ဖြစ်ကြသည် 51 ရန် 58 လက်မအရှည်နှင့်လင်းယုန်ငွေ Putters ဖြစ်ကြသည် 59 ရန် 66 လူတိုင်းအတွက် Junior Nike Putters ရှိတယ်ဘယ်လောက်ပဲကြီးကြီးနေပါစေ. မာစတာအငယ်တန်း Putter တွင်မာစတာဂေါက်သီးရိုက် J110 အငယ်တန်းစံ Putters နှင့် Masters ဂေါက်သီး J110 အငယ်တန်းတို့ပါဝင်သည်2Ball Putters. အဆိုပါ J110 အငယ်တန်းစံ Putters နှင့် J110 အငယ်တန်း2Ball Putter ကိုအောက်ပါအရွယ်အစားဖြင့်ရရှိနိုင်သည်, 3'8 အထိ″, 3'8″ 4'5 ရန်″ နှင့် 4'6″ 5’0″ နှင့်လက်ျာနှင့်လက်ဝဲလက်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ကမ်းလှမ်းနေကြသည်. Golf Buy It Online မှအွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းဆိုသည်မှာသင်လိုအပ်သည့်အရာများကို ၀ ယ်ယူနေကြောင်းနှင့်စျေးနှုန်းမှန်ကြောင်းသင်သိစေရန်သင်၏ထုတ်ကုန်များအတွက်ကြီးမားသောထုတ်ကုန်များနှင့်ထိုထုတ်ကုန်များအတွက်သတင်းအချက်အလက်များစွာကိုသင်ရရှိနိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။. အငယ်တန်း Putters
Nitto တာယာများ – အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအထူးဖြစ်ကြသည်
မော်တော်ကားစက်မှုလုပ်ငန်းများအထူးသဖြင့်တာယာနှင့်ရာဘာလုပ်ငန်းမှထွက်ပေါ်လာသောတောက်ပသောဆန်းသစ်တီထွင်မှုများထွက်ပေါ်လာကြောင်းသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။. ယာဉ်မောင်းများနှင့်မြင်းစီးသူရဲများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့နှစ် ဦး စလုံးအားကိုးအားထားပြုရသောသက်တောင့်သက်သာရှိမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုများစွာကြွေးတင်နေသည်။. မော်တော်ကားနှင့်တာယာလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်သူများသည်ယင်းကိုသိကြသည်. ပြီးတော့မေးခွန်းမရှိဘဲ, Nitto Tires ဒါကိုနားလည်တယ်. သို့သော်, ဤသည် Nitto များအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ဘုံမဟုတ်ပါဘူး. သာမန်ယာဉ်မောင်းများ၏သက်တောင့်သက်သာရှိမှုအရှိန်အဟုန်ကိုကြာမြင့်စွာကတည်းက လိုက်၍ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတွက်ချက်သောအခါ၊, ကောင်းပြီ, ဒီ Nitto တာယာများအတွက်နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်. ၎င်းသည်လေဆာကိုရရှိသောအခါခြားနားမှုအားလုံးကိုဖြစ်စေမည့်လိုင်းကိုဖြတ်ပစ်လိုက်သည်, ကောင်းပြီ, ဤသည်ကျိန်းသေ Nitto ၏နယ်မြေဖြစ်ပါတယ်. သင်မြင်တဲ့အတိုင်း, Nitto သည်သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ တူညီသောတန်ဖိုးတစ်ခုရှိမည်မှာသေချာသည်, တာယာလုပ်ငန်းတွင်အခြားခေါင်းဆောင်တစ် ဦး အနေနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုရရှိသည်, ဒါပေမယ့်အဲဒီမှာပစ်မှတ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများအားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေတစ်ခုအတွက်ကောင်းစွာချွတ်အိပ်ရကြ၏. ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ပျမ်းမျှမော်တော်ယာဉ်မောင်းသူနှင့်အလိုအလျောက်သွားခွင့်ပြုသမျှသောအစိတ်အပိုင်းများကိုထုတ်လုပ်သူသည်လိုအပ်ချက်များကိုစဉ်းစားရန်, ဘရိတ်, ဘောင်နှင့်မော်တာအင်ဂျင်နီယာ. ဤရွေ့ကားကား၏အခြေခံအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ကြသည်ပါဝင်ပတ်သက်မည်သူမဆိုနားလည်သဘောပေါက်နိုင်သော၎င်း၏အလုံးစုံစွမ်းဆောင်ရည်မှအရေးပါသောဖြစ်ကြသည်. ဒါပေမယ့်, Nitto တာယာများသည်ရွေ့လျားမှုတစ်ခုတွင်ထိုရှုထောင့်နှင့်ကိုက်ညီပြီးတစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းတို့သည်သင့်ကိုဤမျှဝေးဝေးယူဆောင်သွားပြီးတာယာ၏အရေးပါမှုသည်တစ်ပြိုင်တည်းဖြစ်သွားလိမ့်မည်။ (ယေဘုယျအနေဖြင့်, ဒါပေမယ့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ဘုံ၌တည်မြဲအာမခံချက်နှင့်အတူ) အလွန်လျစ်လျူရှုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်. ဤအချက်သည် Nitto Tyres များကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တာယာအရည်အသွေးအကန့်အသတ်ဖြင့်နေ့စဉ်တွန်းအားပေးသည်. Nitto တာယာများ – အဘယ်ကြောင့်သူတို့ကအထူးဖြစ်ကြသည်
N Go Win ဝင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ – ကောင်းလားဆိုးလား?
စစ်မှန်သောဖဲချပ်ဂိမ်းများတွင်လမ်းညွှန်၏ရလဒ်များကိုတွေ့မြင်ပြီးနောက်ဤ Sit N Go Win ပြန်လည်သုံးသပ်မှုကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်သည်မဖြစ်မနေလိုအပ်သည်. အကယ်၍ သင်သည် Poker ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပြီး၎င်းကိုကစားခြင်းဖြင့်ငွေရှာခြင်းကိုနှစ်သက်သည်, သငျသညျအထူးသဖြင့်အကျိုးစီးပွား၏ဤပြန်လည်သုံးသပ်တွေ့ပါလိမ့်မယ်. မျှော်လင့်ပါတယ်, လမ်းညွှန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံများကိုဖတ်ပြီးနောက်သင်အမှန်တကယ်၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းမှထွက်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည့်အရာနှင့်၎င်းသည်သင့်ကိုယ်ပိုင်လေ့လာသင့်သည့်အရာဟုတ်မဟုတ်ကိုကောင်းစွာနားလည်လိမ့်မည်။. World Series of Poker ပြိုင်ပွဲမှာထိုင်ရတာဘာဖြစ်ချင်လဲလို့စဉ်းစားဖူးတယ်, ကမ္ဘာပေါ်ရှိအကောင်းဆုံးကစားသမားများကဝိုင်းရံထားသည်, နှင့်အနိုင်ရ? သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်သင်၏နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ် Texas Hold'em ဂိမ်းကိုပုံမှန်အနိုင်ရရန်သင်အခြေချမည်လား? ကောင်းပြီ, သင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရတဲ့ထိုင်ခုံအဖြစ်ပြောင်းပြီးလူတစ်ယောက်ထက်ပိုပြီးအနိုင်ယူနိုင်တဲ့စနစ်နဲ့ကစားသမားကိုသွားနိုင်ပါတယ် $62,000 ဖဲချပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုတွင်သုံးစွဲသူအမည်တစ်ခု၏ချွတ်ယွင်းချက်: N Go Win ဝိုင်းထိုင်. Sit N Go Win သည်သင်၏အွန်လိုင်းဖဲချပ်ပြိုင်ပွဲတွင်စားပွဲများကိုလှည့်ပေးသည့်တော်လှန်ရေးသမားလမ်းညွှန်ဖြစ်သည်. စနစ်ကသင့်ကိုခွဲခြားရန်ကူညီနိုင်သည် 95 သူတို့ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသဲသဲမဲမဲမသိဘဲအွန်လိုင်းပေါ်ကကစားသမားရာခိုင်နှုန်းကသင့်ကိုလှေတွေများများစားစားဖြစ်စေသည်. ထိုင်ပြီးသွားသည်အွန်လိုင်းလောင်းကစား၏အနာဂတ်, နှင့် Sit N Go Win တို့ကနေ့စဉ်ရက်ပေါင်းထောင်ချီ။ အနိုင်ရရန်ဖန်တီးသူသည်နေ့စဉ်သုံးလျှို့ဝှက်လျှို့ဝှက်ချက်များကို သုံး၍ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ရန်ကူညီနိုင်သည်။. တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်, သင်၏ငှားရမ်းခကိုပေးနိုင်သည့်ရိုးရှင်းသောနည်းဗျူဟာများဖြင့်လမ်းညွှန်သည်သင့်အားလမ်းလျှောက်သည်. ဒီလမ်းညွှန်နှင့်အတူ, သင်၏တစ်နေ့တာအလုပ်ထွက်ပြီးဖဲချပ်အားအချိန်ပြည့်ကစားခြင်းသည်အဖြစ်မှန်၏နယ်ပယ်အတွင်းတွင်ရှိသည်. ရိုးရိုးလေးပြောရမယ်, Sit N Go Win နှင့်အတူသင်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်ငွေအမြောက်အများကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်, တစ်ခုတည်းညဥ့်. မင်းဆေးလိပ်ဖြတ်ပြီဆိုပါစို့ 9-5 ဥပဒေကြမ်းနှင့်ငှားရမ်းခများတွက်ချက်ခြင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာမလိုဘဲအလုပ်နှင့်ငွေဖြုန်းခြင်း! Sit N Go Win ကိုကျွမ်းကျင်မှုအဆင့်တိုင်းရှိဖဲချပ်ကစားသမားများအားအထူးအကြံပြုလိုသည်. သင်၏လက်ချောင်းထိပ်တွင်ဤလမ်းညွှန်ဖြင့်မည်သည့်အရာမျှမဖြစ်နိုင်ပါ. N Go Win ဝင်းပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ – ကောင်းလားဆိုးလား?
ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခြင်းလေ့ကျင့်ခန်းသည်ဂေါက်သီးကစားသမားများအားလုံး၎င်းတို့၏ဂေါက်သီးလွှဲစွမ်းအားကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်စက်ပြင်များသည်ရာသီမကုန်မီအထူးသဖြင့်အကြီးတန်းဂေါက်သီးသမားကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။’ သို့မဟုတ်ဆောင်းတွင်းလများ. သငျသညျအကြှနျုပျ၏ဆောင်းပါးများကိုမဆိုဖတ်ပြီးပါပြီလျှင်ငါကနေလာမယ့်ငါဘယ်မှာသိပါလိမ့်မယ်. ‘သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ကသင်၏ဂေါက်သီးလွှဲခြင်းကိုဆုံးဖြတ်သည်!’ 'ကျိုးပဲ့သောကိုယ်ခန္ဓာသည်အကောင်းဆုံးဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုဘယ်တော့မျှရရှိမည်မဟုတ်'. ‘သင်သည်သင်၏ limit ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များကဲ့သို့သာကောင်းသည်’ ခွင့်ပြုမယ်’ သငျသညျကပထမ ဦး ဆုံးကြား၏ကြား၏. အပေါ်မှာငါ့ကိုးကား 'ငါ့ကိုးကား' ဖြစ်ကြသည်’ ငါကျော်အဘို့အသုံးပြုကြပြီ 10 အားလုံးအသက်အရွယ်မရွေးဂေါက်သီးနှင့်အတူနှစ်ပေါင်း, စွမ်းရည်များနှင့်လိင်. ငါကအတိတ်တလျှောက်လုံးအကြိမ်ထောင်ပေါင်းများစွာမြင်ကြပြီ 10 နှစ်ပေါင်း. ဂေါက်သီးကစားသူများကသူတို့သည်ဂိမ်းကိုစွန့်ခွာလိုကြသည်. သူတို့သင်ခန်းစာယူပါတယ်. သူတို့လက်လက်စုပ်မှီတိုင်အောင်ကျင့်သုံးပါတယ်. ထိုသူတို့ကနောက်ဆုံးပေါ် / အကြီးမြတ်ဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများပိုင်ဆိုင်သည်. ပြီးတော့’ သူတို့ကမဆိုပိုကောင်းကစားကြသည်မဟုတ်! အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကသူတို့လုပ်နိုင်သည်ဟုထင်သောအရာများမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်. စိတ်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အကြားကွာဟမှုရှိပါသည်. သငျသညျသလောက်လိုချင်သလောက်သင်၏စိတ်၌ကြီးစွာသောဂိမ်းလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နိုင်စွမ်းမပါဘူးဆိုရင်ဘယ်တော့မှဖြစ်လိမ့်မည်! သူများသည်အအေးခဲအချက်အလက်များဖြစ်ကြသည်. သင်၏ခန္ဓာကိုယ်သည် 'မှော်ကျည်ဆန်' ဖြစ်ကြောင်းသင်သိသည်နှင့်အမျှ, မကြာမီသင်သည်ဂေါက်သီးအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းလေ့ကျင့်မှုကိုစတင်ပြီးစစ်မှန်သောရလဒ်များကိုတွေ့နိုင်သည်. ဤရလဒ်သည်ရေရှည်လည်းဖြစ်လိမ့်မည်! တောင်မှကြာရှည်မကျင့်သောအဘယ်သူမျှမတီးဝိုင်း - အကူအညီလွှဲပြင်ဆင်မှုများ 18 တွင်း. ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအတွက်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းသည်သင်ကိုယ်တိုင်အပေါ်အာရုံစိုက်သင့်သည်, အချိန်နှင့်ငွေကိုချွေတာရန်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကန့်သတ်ချက်များ. သင်၏အကန့်အသတ်များကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏ဂေါက်သီးကစားနည်းကိုကြည့်နေပါ! ငါသကြားကုတ်အင်္ကျီမဟုတ်သင်လှုံ့ဆျောဖို့ဒီနေရာကိုမိပါတယ်! ဒါဟာ tee ကိုချွတ်သူတို့အားဆုံးရှုံးခဲ့ရကိုက်ပြန်လည်ဖို့အချိန်ပါပဲ, နှင့်သင်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းလုပ်ခဲ့တယ်ရိုက်ချက်ရမှတ်ပြန်ရ! ဂေါက်သီးရိုက်ခြင်းအတွက်သင်၏လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုယခုစတင်ပါ. ဂေါက်သီးကစားခြင်းအတွက်လေ့ကျင့်ခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ရာများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်
Iron Palm Q မှဆက်လက်&Sigung ရစ်ချတ် Clear အပိုင်းနှင့်အတူတစ် ဦး2ငါဒေါက်တာဝူ၏ကွန်ဖူးစနစ်ကိုစတင်လေ့လာခဲ့သည် 1982 ဒေါက်တာဝူ၏အခြားအကြီးတန်းကျောင်းသားတစ် ဦး ထံမှပြီးတော့ငါအတွက် Tyrone ကနေလေ့လာနေစတင်ခဲ့သည် 1984. ရလဒ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဟာ Iron Palm ကိုသင်တန်းတက်ခဲ့တယ် 1984. ငါတကယ် Iron Palm ထွက်ရှာကြံမခံခဲ့ရပါဘူး. ငါကတက်ကြွစွာရှာဖွေရန်ဖို့အကြောင်းအလုံအလောက်မကြားဘူး. Iron Palm နှင့် Dim Mak တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ရရှိခဲ့သောကွန်ဖူးသင်တန်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမျှသာဖြစ်သည်. ငါလေ့ကျင့်မှုစပြီးတာနဲ့ငါကခဏလောက်ချိတ်ဆက်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့တခြားစွမ်းရည်တွေရလာရင်ငါကစွမ်းအင်သင်တန်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကိုပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်။. မေး. 4. ဘယ်သူ့ဆီကသင်ယူခဲ့တာလဲ? က. နှစ်တွေတစ်လျှောက်မှာဆရာအတော်များများဆီကနေကျွန်တော်သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်. သို့သော်, ကျွန်မရဲ့ Iron Palm ရဲ့မူလတန်းမူလတန်းဆရာကတော့ Tyrone ပါ. မေး. 5. သင့်ရဲ့သံစွန်ပလွံသီးသည်သင့်အားမည်သို့အကြံဥာဏ်များပေးခဲ့သည်? က. Tyrone နှင့်လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအရာတစ်ခုမှာသူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုမည်သည့်အခါကမျှမချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်. အကြောင်း 1986 ငါဗဟိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုကိုချိုးဖျက်ဖို့ငါ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်. ဒီတော့, ငါဒီဟင်းလင်းပြင်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုနှစ်ခုကတခြားခိုင်မာတဲ့နှင့်ကြံ့ခိုင်အလယ်ဗဟိုလုပ်ကွက်များ၏ထိပ်ပေါ်မှာတင်ကချိုးဖျက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်. ငါကအကြိမ်ပေါင်းများစွာထိမှန်နှင့်ဘယ်နေရာမှာတယ်. ငါ၏အ hits မှတဆင့်လမ်းတလျှောက်လုံးထိုးဖောက်ခဲ့ကြပေမယ့်မျှမတို့သကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်. နောက်ဆုံးတော့, ဒီရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ငါအလွန်စိတ်ပျက်ဖြစ်လာခဲ့သည်. ငါ့အတန်းဖော်တစ်ယောက်ကငါ့အိမ်ကိုလာပြီးကြည့်တယ်2အုတ်ကိုထောက်ခံပြီးသူတို့ထဲကထိပ်အုတ်ကိုရွှေ့ပေးသည်. အထောက်အပံ့လုပ်ကွက်နှစ်ခုလုံးတွင်ပြိုကွဲနေသောလိုင်းများရှိပြီး၎င်းတို့ကိုကိုင်ဆောင်နေစဉ်တွင်သူတို့ကအလင်းရောင်ထိပုတ်ခြင်းနှင့်ပြုတ်ကျသွားသည်။. ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ‘Iron Palm Part 4’ သံထန်းအပိုင်း 3
Fishing asasport and recreational activity is very popular in the United States. It has beenatraditional hobby of the Americans as well as tourists in the USA. The Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico, including the many streams of water across the country offer greater opportunities for Salt water fishing. United States of America has many rivers, lakes and inland streams for fresh water adventures. Fishing in the U.S.A. is very diverse because of the fish migrating every season. ရာသီဥတု, သို့သော်, is one factor that restrains people from fishing. Rain, fog, ဆီးနှင်း, and wind affect the fishermen since these conditions may sometimes be dangerous to them. Since the fish are diverse, fishermen havealot of fishing techniques depending on the type of fish they are targeting. They can do surf fishing, ငါးဖမ်းခြင်း, ငါးစာသတ္တုများပုံသွန်း, pier fishing and many other techniques. Florida for example, is one state that has long been famous for fishing. Everywhere in Florida you seealot of men and women of different ages getting excited about fishing. You see them holding fishing lines in bridges, causeways, riverbanks and piers. ဒါ့အပြင်, Charter fishing boats are popular in all coasts of Florida. Florida is known for its saltwater fishing and fly fishing. You need to be versatile to get the most out of Florida’s fly fishing adventures. Fly fishing and saltwater fishing are your choices depending on the time of the year. There are abundant Redfish in Daytona Beach, Titusville and St. John’s River. Spotted Sea Trout are also found in Florida. You can findalocal guide in the area and they will be able to help you enjoy your fishing experience. Florida has beenahot place for fishing especially during the start of October. There are large numbers of Redfish until mid morning. There arealot of Snooks being caught. During the afternoon when the temperature is high, there arealarge numbers of jacks, ladyfish and trout that keep the fishermen in action. Americans and tourists haveavariety of reason why they fish in the U.S.A. Some love to see the sunrise and sunset in the water. Besides fishing, some love to watch dolphins, whales and birds. But still it is the catching of fish that really thrill them. Fishing in the U.S.A isameaningful pastime whether in groups or all alone. The money you will spend is worth the fun and excitement including building relationships. Fishing In USA
အကယ်၍ သင်သည်ပုံမှန်စိတ်အားထက်သန်သောကစားသမားဖြစ်ပါက၊, သင်ရုံးထဲမှာရှိနေရင်တောင်, ထို့နောက်သင့်ရုံး၌လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်ဤဂေါက်သီးသင်ကြားခြင်းအချက်သည်များစွာအထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မည်. သို့သော်ပထမ ဦး စွာဆန့်လေ့ကျင့်ခန်း၏တန်ဖိုးကိုသဘောပေါက်ရန်အရေးကြီးသည်, ဤဆောင်းပါး၌ဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်အစွန်အဖျားအားလုံးအကြောင်းပါတယျ. ဂေါက်သီးလွှဲကိုလူ့ခန္ဓာကိုယ်ကခုခံတွန်းလှန်သည်၊, အဖြစ်ဝေးလူ့ခန္ဓာကိုယ်သက်ဆိုင်ရာအဖြစ်. ဂေါက်သီးရိုက်သည့်လေ့ကျင့်ခန်းများသည်သင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂေါက်သီးလွှဲခြင်းနှင့်တတ်နိုင်သမျှလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်များစွာအထောက်အကူပြုသည်. စိတ်ကူးကတော့ဂေါက်သီးရိုက်နေစဉ်အတွင်းကိုယ်ခန္ဓာကိုသက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေဖို့အတွက်သင်ကသူ့ကိုအများကြီးလျှော့ချပေးဖို့ဖြစ်တယ်’ အဆင်မပြေ. ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောရမယ်ဆိုရင်ဂေါက်သီးရိုက်နေချိန်မှာသင့်ခန္ဓာကိုယ်ကပိုပြီးအဆင်ပြေပါတယ်, သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးလွှဲအရည်အသွေးကပိုကောင်းလိမ့်မယ်. ဒီဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်ဟာကြီးမားတဲ့ပြproblemsနာတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ဂေါက်သီးကစားဖို့အချိန်ဖန်တီးတဲ့အလုပ်များတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမှုဆောင်တွေအတွက်ပါ, အားကစားခန်းမမှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ဖို့အချိန်ပိုပေးရမယ်. ရုံ 15 တစ်စက္ကန့်လျှင်စက္ကန့်အနည်းငယ်အတွင်းသင်၏ဂေါက်သီးအားသင်ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်အတွက်ဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်ကိုလုပ်ဆောင်ရန်လုံလောက်သည်. တကယ်တော့ရုံးထဲမှာသင်လုပ်နိုင်တဲ့လမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်. ဥပမာအားဖြင့်ထိုင်နေသောလှည့်ကွက်သည်နာကျင်မှုကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်နာကျင်မှုကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့တွင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်. ဒါဟာအစလျင်မြန်စွာအများအပြားဂေါက်သီးရဲ့နောက်ကျောလွှဲတိုးတက်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏အကွာအဝေးမှတဆင့်လိုက်နာခဲ့သည်. ရလဒ်အနေဖြင့်ကလပ်အမြန်နှုန်းပိုမိုမြင့်မားပြီးအကွာအဝေးပိုမိုများပြားသည်. လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်ဒီဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်အစွန်အဖျားလုပ်ဖို့, မင်းရုံးထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးဖြောင့်မတ်စွာထိုင်ဖို့လိုတယ်, ရင်ဘတ်အမြင့်နှင့်နောက်ကျောဖြောင့်အတူ. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်နောက်တစ်လက်မောင်းနှင့်သင့်နောက်သို့ရောက်ရှိနိုင်သည်, သောသင်၏အထက်ခန္ဓာကိုယ်လှည့်ပါလိမ့်မယ်. စိုက်ထူနေစဉ်, သင်သွားနိုင်သကဲ့သို့ဝေးနောက်ကျောအကြောင်းကိုလှည့်ပါ 10 စက္ကန့်ပိုင်း. သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အခြားလမ်းလှည့်ခြင်းနှင့်ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါတယ်. နှစ်ဖက်စလုံးကိုသွားပါ 2-3 ကြိမ်, အဘို့အကျင်းပရန်သတိရ 10 စက္ကန့်ပိုင်း, တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်. ဤသည်ဂေါက်သီးညွှန်ကြားချက်အစွန်အဖျားများစွာသောဆုလာဘ်ရိတ်ပါလိမ့်မယ်. ဂူးဂဲလ်ညွှန်ကြားချက်သိကောင်းစရာ
From March 14th and for the next three weeks until April 3rd, 64 NCAA College Basketball teams will be performing after one common goal: to win the National Championship in Indianapolis. The top four seeds in the NCAA tournament are Duke University in Durham, မြောက်ကာရိုလိုင်းနား; Villanova University in Villanova, Pennsylvania ပြည်နယ်; the University of Connecticut and the University of Memphis. In 1981 the NCAA wanted to increase the number of teams that would participate in this tournament from 48 ရန် 64. The NIT declared they wouldn’t be able to holdafirst rate post season tournament if this happened. Four years later the modification was accepted and since then there have been 64 teams on the bracket. In 2001 the NIT filed an antitrust lawsuit claiming the NCAA was trying to put the NIT out of business. With the trial under way last year, the NCAA reached an agreement to buy the NIT and end the litigation. The NIT is formed by 40 teams. The four top bracket seeds for this year are the Universities of Maryland, Michigan, Louisville and Cincinnati. They all are former NCAA tournament champions. Basketball icons like George Mikan, Lenny Wilkens, and Walt Frazier are part of the NIT’s history. Future pro legends Reggie Miller and Ralph Sampson were NIT Most Valuable Players. ပြီးနောက် 68 years the National Invitation Tournament (NIT) is suffering new changes and improvements after being bought by the National Collegiate Athletic Association, including new marketing strategies, more geographic diversity and TV coverage of bracket selections. The NCAA says it bought the NIT to settle the antitrust lawsuit and to improve the postseason gala for the good of the game. NYU, Fordham University, Wagner College, Manhattan College and St. John’s University owned the NIT through the Metropolitan Intercollegiate Basketball Association. All semifinal and final games have been played at New York’s Madison Square Garden. This year’s NIT which also starts today ends on March 30th. NIT Versus NCAA National Championship